Boeing 737 max 8: tsy mahazo misidina | NewsMada
Boeing 737 max 8: tsy mahazo misidina
Nandray fepetra avokoa ny firenena maro maneran-tany, mandrara ny fiaramanidina Boeing 737 Max 8 seat, tsy mahazo misidina ana habakabaka. Natao izany taorian’ny fianjeran’ity fiaramanidina ity, an’ny kaompania Ethiopian Airlines, tany Addis Abeba, ny 10 marsa teo, nahafatesana olona miisa 157. Firenena voalohany nandray ny fanapahan-kevitra ny any Sina ary nanaraka ny hafa maneran-tany. Anisan’izany ny any Frantsa, ny any Angletera, ny any Alemaina, ny any Singapour, ny any Korea Atsimo, ny any Aostralia, ny any Brezila, ny any Meksika, ny any Arzentina, sns.
Indroa nianjera ny fiaramanidina Boeing 737 Max 8 tao anatin’ny dimy volana. Nianjera tany an-dranomasina any Java, Indonezia, ny fiaramanidina an’ny kaompania indonezianina Lion Air, ny faran’ny volana oktobra 2018, nahafatesana olona miisa 189. Fantatra fa anisan’ny fiaramanidina raitra sy be mpividy indrindra ny Boeing 737 Max 8. Efa manadihady ny nahatonga ny loza ny kaompania amerikanina, ny Boeing.
Manana fiaramanidina miisa enina amin’ity ny Ethiopian Airlines ka tsy ampiasaina koa ireo dimy ambiny, miandry ny valin’ny fanadihadiana nahatonga ny loza. Anisan’ny mivezivezy mampitohy an’Antananarivo sy i Addis Abeba ity fiaramanidina ity. Voatery nanolo karazany hafa ny Ethiopian Arilines, ary voalaza fa tsy misy fiantraikany amin’ny zotra.